Dil naxdin leh :- Gabar maalmo la raadinayey oo Meydkeeda laga helay Digsi weyn oo lagu dhex qariyey iyo dad loo xiray dilka . | Weheliye Online
Dil naxdin leh :- Gabar maalmo la raadinayey oo Meydkeeda laga helay Digsi weyn oo lagu dhex qariyey iyo dad loo xiray dilka .
Faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dhacdo ugub ah oo u dhacday gabar yar oo qoyskeeda raadinayeen in ka badan laba asbuuc oo meed keeda la helay.
Gabadhan yar oo magaceeda lagu sheegay Nafisa Cumar C/llaahi oo la baafinayey muddo 2 maalmood ah ayaa maanta waxaa la yaab noqotay in laga dhex helay Digsi weyn oo Gurigooda yaallay, kaasoo lagu riday, laguna daboolay, waxayna arrintan fajaciso ku noqotay qoyska iyo dadka deriska la ahaa.
Xogta laga helay laamaha amniga ayaa sheegaya in gabadha oo 10 sano jir ahayd meydkeeda uu ka muuqday jirdil iyo in laga xiray gacmaha iyo lugaha, waxaana ehelka gabadha yar ay sheegeen in habeen hore iyo xalay ay raadinayeen, markii danbena la dareemay ur, iyadoo arkii la raadiyey laga dhex helay Digsi weyn oo mid kale la dulsaaray, kadibna la sii saaray Joodari.
Laama amaanka ayaa xabsiga dhigay 10 ruux oo ka mid ahaay dadka guriga la dagnaay gabadha la dilay,isla markaana dhammaan dadkii deganaa lagu xiray xabsiga saldhiga Dharkeynley ee Gobolka Banaadir.
Falkan ayaa ka dhacay waaxda Kaawo Godey ee degmada Dharkenlay. Ilaa 7 qof oo ka mida Qoyskeeda iyo dadii guriga ku sugnaa ayaa loo xiray kiiskan, waxaana socda baaritaan lagu bilaabay sida arrintan naxdinta leh ku dhacday.
Lama oga cidda sida dhabta ah uga dambeysay falkaan waxuush nimada ah balse waxa laga warsugayaa baaritaanada ay wadaan laanta dambi baarista,ehelada gabadha ayaa codsay in cadaalada la hor keeno cidii dishay gabadhooda.
Previous articleWasiir Dubbe oo war cusub ka soo saaray wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland
Next articleDEG DEG: RW oo la saftay mucaaradka,Xil ka qaadis deg deg ah MD Farmaajo oo isugu yeeray xildhibaano